सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मी हुनु त एपिएफ जस्तो… – Nepal Japan
नेपाल जापान १४ मंसिर २१:११
चिटचिट पसिनाले गञ्जी चिसो भयो । रिँगटा चल्न थाल्यो । मैले यतिविघ्न टाउको दुखेको जीवनमा कहिल्यै अनुभव गरेको थिइन, ज्वरोको तापक्रम १०० डिग्रीभन्दा माथि नै थियो । उठ्न कोशिस गरेँ । खुट्टा टेकिएनन् । छिप्पिँदो रातले बिहानीको प्रतीक्षा गर्दै थियो । कसलाई के भनौँ ? लाग्यो जीवन यति नै रहेछ कि !
श्वासप्रश्वासमा अप्ठ्यारो छँदै थियो । कोठा उज्यालो थियो । आशाका किरण धपक्क निभे । आँखा घुमे, जता हे¥यो, सर्वत्र अन्धकार । साहस हराउँदै थियो ।
गत चैतदेखि अस्पताल व्यवस्थापनले कोभिड र अन्य बिरामीलाई सहज उपचार सेवाका लागि अलगअलग नयाँ मार्गदर्शन लागू गरेको थियो । यसले अस्पतालको सेवा अझ छिटोछरितो र चुस्त पारेको छ । अस्पतालले भर्ना भएका कोरोनाका बिरामीलाई आवश्यक सबै सन्तुष्टि दियो र दिँदैछ । बिरामीले निजी अस्पतालमा जस्तो दैनिक हजारौँ खर्च गर्दा नपाइने चिकित्सकीय सेवा, खानपान तथा अन्य बन्दोबस्ती निःशुल्क पाएँ । अस्पतालबाट कोरोनालाई जितेर घर फर्किनेहरु भन्छन्, “अस्पताल हुनु त यस्तो पो । पुनर्जन्म लियौँ ।
धन्य ! एपिएफका स्वास्थ्यकर्मी र व्यवस्थापक । चाहे के गर्न नसकिँदो रहेछ र ? उपचार सेवा, स्वास्थ्यकर्मीका बोली व्यवहार, खानपान र भौतिक बन्दोबस्ती व्यवस्थामा अभाव छैन ।” हालै १० दिन अस्पतालमा भर्ना भई ज्वरो निको हुनुभएका धादिङ सिद्धलेक गाउँपालिका– ७ का राममणि खतिवडाले भन्नुभयो, “सरकारी अस्पताल हुन त एपिएफ जस्तो । स्वास्थ्यकर्मीका सेवा , मीठो बोलिवचन, सरसफाइ र खाना राम्रो लाग्यो । बिरामीलाई उपचार त छँदैछ, स्वास्थ्यकर्मी र व्यवस्थापकले बिरामीको पीडालाई राम्ररी बुझ्ने गर्नुहुँदोरहेछ ।”